Mpanamboatra sy mpamatsy moto | Orinasa moto manarona China
Sarony môtômanana anarana maro samihafa toy ny, fonosana moto, akanjo môtô, fiara fitaterana môtô sns. Eto izahay dia manoro hevitra karazana sarona moto roa, ny iray dia karazana volafotsy lehibe. Izy io dia afaka mametraka mora foana ny lokomotifan'ny fivezivezena lehibe, miaro ny fiaranao amin'ny vovoka, fasika, fasika, orana, lanezy, rivotra ary fanala, ary manakana ny olon-tsy fantatra hikasika sy handoto ny taim-biby.
Seranana fiara mifono môtô finday
Ity môtô môtô ity dia afaka mametraka mora foana ny moto kely sy salantsalany mifindra monina, miaro ny fiaranao amin'ny vovoka, fasika, vatokely, orana, lanezy ary rivotra, ary hisorohana ny vahiny tsy hikasika sy handoto ny fahalotoan'ny biby. Tsotra sy kanto ny endrika ivelany, miaraka amin'ny haitao matanjaka.
Sarona moto mijanona sy mihetsika
Ity fiara môtô ity dia afaka mametraka moto mora foana isan-karazany, miaro ny fiaranao amin'ny vovoka, fasika, fasika, orana, lanezy ary rivotra, ary hisorohana ny vahiny tsy hikasika sy handoto ny dikin'ny biby.
Azo amboarina amin'ny tany fisaka na apetraka amin'ny tranofiara. IQ, ny lamaody dia tena lamaody, ary ny endrika dia manana fahatsapana haitao matanjaka. Ny iray hafa dia ny karazana fotsy kelintsika, afaka mametraka mora foana ireo karazana lokomotivezana kely sy salantsalany. Ireo fiasa hafa dia mitovy amin'ny an'ny vokatra teo aloha ihany. Saingy tsy mitovy ny lokony sy ny endriny. Azonao atao ny manavaka sy misafidy amin'ny alàlan'ny sary amin'ny antsipiriany.